:: My Little World ::: October 2008
"မြန်မာလက်ရာ စစ်စစ် စားသုံးလိုသူများအတွက် မန္တလေးမြန်မာဆိုင်"...
Blk 328, #01-220,Clementi Ave 2, Singapore 120328
နိုဝင်ဘာလ ၂ရက်နေ့နံနက် ၉:၀၀ နာရီမှ ၁၂း၀၀ နာရီ အထိ မုန့် ဟင်းခါးဖြင့် ဧည့်ခံမည်ဖြစ်ပြီး၊
၉ နာရီမှ စတသင်၍ ဆိုင်ဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်ဖြင့်
အထူးဈေးနှုန်းဖြင့်လည်း ရောင်းချပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်နေရာမှာလဲ အတိအကျ သိချင်တယ်ဆို အောက်က ပုံတွေကို click လုပ်ပြီးကြည့်ပါ။
မြေပုံမှ ပြထားတာတော့ အခုအသစ်ဖွင့်မယ့် မန္တလေးမြန်မာဆိုင် က "ကောင်းစုံ" ဆိုင်နဲ့အတော်လေး နီးကြောင်း တွေ့ လိုက်ရပါတယ်။ ဟိုးအရင် Clementi မှာ နေစဉ်အခါတုန်းကတော့ ကောင်းစုံ ကို တစ်ခါတလေ ရောက်ဖြစ်တယ်။ အခုများတော့ အဲဒီဘက်ကို မရောက်တာ အတော်ကြာပါပြီ။
မန္တလေးမြန်မာဆိုင် အကြောင်း ဒီနေရာမှာရေးတာ ဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ သိလို့ ကြော်ငြာပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် အီးမေးက တစ်ဆင့် သတင်ပေးလာသည့် အတွက် Clementi Area မှာ နေထိုင်သူများ အခုလာမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့(နိုဝင်တာ ၂ ရက် ) နေ့မနက် ၉ နာရီ-၁၂ နာရီအတွင်း မှာ ဆိုင်ဖွင့်ပွဲအနေနဲ့အလကား ကျွေးမယ့် မုန့် ဟင်းခါးကို မနက်စာအဖြစ် သွားစားလိုပါက သွားရောက် စားသောက်နိုင်ရန် နှင့် နောက်ရက်ပိုင်းတွေမှာလဲ သွားရောက် အားပေးနိုင်ရန် အများအကျိုးဆောင်၍ သတင်းပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင် :-)
Labels: Food, Myanmar, Singapore
Posted by Nay Nay Naing at 10/31/2008 09:28:00 PM 8 comments
မဟုတ်တဲ့ နေရာဆို တို့ မြန်မာပြည်က ထိပ်ဆုံးစာရင်းမှာ အမြဲ ပါနေတာပါပဲ။
Top 10 Countries Censoring the Web by DailyBits
ကိုယ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ မြန်မာပြည်အကြောင်းကိုပဲ ကူးယူဖော်ပြလိုက်တော့တယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေအကြောင်း သတင်းအပြည့်အစုံ နဲ့တခြားသူတွေ ရေးထားတဲ့ ကွန့် မန့် တွေ ဖတ်ချင်တယ်ဆို မူရင်း ဆိုဒ်မှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Burma, officially the Union of Myanmar, isacountry characterized by severe human rights problems, so it would be hard to expect an open and reliable Internet adoption. It is estimated that less than 1% of its population has access to the web, and this happens viaahandful of cybercafes, and always under tight surveillance.
Burma relies onaheavy regulatory framework to control the access to the Internet. Computers that want to access the web need to be registered with the Myanmar Posts and Telecom company, andafee must be paid as well.
The price of the Internet connections is also prohibitive for the largest part of the population, and broadband connections are almost nonexistent among the general public.
Additionally, they also haveafiltering system at the ISP level, targeting mainly independent media websites.
Myanmar has an official Intranet, which is the only content available for many of its Internet users (the ones using dial-up connections). Onlyasmall number of pre-approved websites are present there.
Free email services are also blocked, so people must use the state-owned service which is always monitored for keywords and sensitive content.
The main target of the censorship is political content that might go against the current government ideology.
Posted by Nay Nay Naing at 10/30/2008 11:08:00 PM4comments
ပင်ပန်းနေတယ်... အလုပ်က ပြန်ရောက်ကတည်းက ထမင်းစားပြီး သီချင်းတွေလိုက် နားထောင်ဖြစ်တယ်။ ဘာသီချင်းမှ စိတ်ထဲ မတွေ့ ၊ သီချင်းကို ပြီးအောင် နားမထောင်ဘဲ တစ်ပုဒ်ပြီး တစ်ပုဒ် ကျော်ချလာခဲ့တာ ဒီသီချင်းမှ တစ်ပုဒ်လုံး ပြီးအောင် နားထောင် ဖြစ်တော့တယ်။ ငယ်ငယ်က ဒီသီချင်းထဲက စာသားတွေမှာ "ပထမဆု ရယူဖို့ ဟေ့" ဆိုတဲ့ စာကြောင်းကလွဲရင် တခြားဘာ စာသားမှ အလွတ် မရခဲ့ဖူးဘုး။ အခု နားထောင်ရင်း ဒီသီချင်းနဲ့ကိုယ့်စိတ်နဲ့တွေ့ သွားတာ သီချင်းစာသားတွေက ခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတာကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီသီချင်းကြောင့် ငယ်ငယ်က အကြောင်းအရာ အတော်များများကို သတိရသွားပြီး စိတ်ပေါ့ပါး ပင်ပန်းတာတွေ သက်သာသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတာကြောင့်ပါ။ သီချင်းစာသားတွေကလည်း အမှန်တရားတွေပဲမို့နှစ်သက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ဇော်ဝင်းထွဋ် - ပထမဆု
ငှက်တွေကြားမှာ သိမ်းငှက်လို့ နေချင်..
တောကောင်များအလယ် .. ခြင်္သေ့မင်းဖြစ်ချင်..
အိုး.. လောကက နိုင်ရာစား ..
အားကြီးမှ နေသာထိုင်သာ ရှိတာလက်တွေ့ 
ပထမဆု ရယူဖို့ ဟေ...
ကျောင်း.. နေအရွယ် .. အမေရဲ့ ကြိမ်လုံး
အချစ်ရေ ဒီအရွယ် ခံပြင်းမှု့အစု
ဆုတွေများစွာ ယူဖို့ တွန်းအား..
အစွမ်းကုန် ကြိုးစားတိုင်း အဆင်မပြေတဲ့
လူဘ၀နဲ့စာသင်ခန်း...
ခြားနားသမျှ .. နာလည်မှု့ အပြည့်..
ပထမဆု ရယူဖို့ ဟေ... ပထမဆုရယူမယ်ဟေ့
ပထမဆု ရယူဖို့ ဟေ....
ပြိုင်ဘက်တွေ မှာ အားနည်းသူ အရှုံး
ချစ်သူရေ ဘယ်သူတွေ အပြိုင်လိုက်နေလဲ
တစ်ယောက်သာ ရွေးချယ် ပထမပေးရမှာ
ဟေ.. မင်းအချစ်လည်း ငါပိုင်ဖို့ 
ငါဘ၀ထဲ ငါနိုင်ဖို့ 
စိတ်ဓာတ်အပြည့် ရင်ဆိုင် ယှဉ်ပြိုင်အသက်ရှည်သေးသ၍
ပထမဆု ရယူဖို့ ဟေ.. လိုတာ ပထမဆုပဲဟေ..
ပထမဆု ရယူဖို့ ဟေ.... ပထမဆု ရယူမယ်ဟေ..
ဒီသီချင်းနားထောင်ပြီး ပထမဆုံး အဖေနဲ့ အမေကိုလည်း သတိရသွားတယ်။ အမေက ဆရာမဆိုတော့ ပထမဆုဆိုတာကို အမြဲ ယူစေချင်တယ်။ သီချင်းထဲကလိုတော့ ကြိမ်နဲ့ ရိုက် မခိုင်းပါဘူး။ ပထမ မရလည်း ဘာမှ သိပ်မပြောပါဘူး။ အဖေက ပထမဆု ယူတယ်ဆိုတာ ပင်ပန်းတယ်တဲ့၊ သမီးလုပ်နိုင်ကြောင်း တခါတလေ ပြရင်တော်ပြီ၊ အမြဲ ရအောင် ယူနေစရာမလိုဘူး၊ စာတွေကြီးပဲ အရမ်း မကြည့်နဲ့ လို့တားတယ်။ အဖေ့သမီး ကျွန်မလည်း အဖေ့စကားအရမ်း နားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဖေနဲ့အမေက ကျွန်မကို ဘာဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ် ဆိုတာမျိုး အတင်းအကြပ် တိုက်တွန်းလေ့ မရှိဘူး။ ဘယ်အရာမှ မရ မဖြစ်၊ ဒါဆို ဒါမှ ဆိုတဲ့ လိုချင်စိတ်မျိုး မပေါ်စေခဲ့ဘူး။ အခု အချိန်အထိပါပဲ။ ဒီအတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်တယ်။
ကျောင်းနေတဲ့ အရွယ် မူလတန်းမှာ ဆုတွေယူအတူယူခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း၊ အလယ်တန်းနဲ့ အထက်တန်းက သူငယ်ချင်း၊ ကျွန်မရဲ့ အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကို သတိရသွားတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက၊ ကျောင်းနေစဉ်က အကြောင်းတွေ စဉ်းစားပြီး စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်။ မူလတန်းက သူငယ်ချင်းနဲ့ တော့ အဆက်သွယ် ရှိတယ်၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းက သူငယ်ချင်းက အိမ်ပြောင်းသွားတာကြောင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတယ်။ အရင်လို ယုန်လေးနဲ့ တူတုန်း ပဲလား။ ဘာတွေများ ပြောင်းလဲသွား သလဲ။ ၁၀တန်းအောင်ပြီးကတည်းက အသေအချာ မတွေ့ ဖြစ်ကြတော့တာ။ အခွင့်ရရင်တော့ တစ်ခေါက်လောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြန်တွေ့ ချင်၊ စကားတွေပြောချင် ပါသေးတယ်။
ဒီသီချင်းကို စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် နဲ့မိုးမိုး က နှစ်ပတ်လည်တို့၏ရင်ခုံသံ (CITYFM 6th Year Aniversity) မှာ ပြန်ဆိုထားတာ ရှိတယ်။ ဘယ်လိုနေလည်း သိချင်ရင် နားထောင်ကြည့်ပါ။
ပထမဆု- စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ၊ မိုးမိုး
ဘာလုပ်မှာလဲ ပြော..... မင်းမကြိုက်ရင် လာမရှုပ်ပါနဲ့ တော့.. အားလုံးက ရှေ့ ဆက်လျှောက်ဖို့ဇွဲနဲ့ ပေါ့ ... နောက်တစ်ခေါက်လောက် နည်းနည်းအော်.....
အသက်ကြီးလာလို့ လား မသိဘူး၊ ဟိုး... ငယ်ငယ် ကျောင်းနေတုန်းက အကြောင်းအရာတွေ ပြန်တွေးမိတဲ့ အခါတွေတိုင်း အတော်လေး စိတ်ချမ်းသာတယ်...
Posted by Nay Nay Naing at 10/29/2008 08:54:00 PM7comments
အပျင်းပြေ စမ်းကြည့်ဖို့ ...
စာလုံးတွေနဲ့အသုံးပြုပြီး မျက်နှာတစ်ခု ရေးဆွဲပေးတဲ့ နေရာတစ်ခု၊ ဆိုဒ့် နာမည်အရဆို ကိုယ်ရဲ့ နာမည်ကို မျက်နှာတစ်ခု အဖြစ် ပြောင်းပေးတဲ့ ဆိုဒ်ပေါ့။ နာမည်မှ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်ထည့်ချင်တာ စာလုံး အကုန်ထည့်လို့ ရတယ်၊ ထည့်သမျှ စာလုံးတွေကို သုံးပြီး မျက်နှာပုံဖော်ပေးတာ ပါပဲ...
အဲဒီဆိုဒ်မှာ စမ်းကြည့်တာ အင်္ဂလိပ်လိုသာမကဘူး၊ မြန်မာလိုရော ဇော်ဂျီကုတ်နဲ့ရေးထည့်ကြည့်တာလည်း အလုပ်လုပ်ကြောင်း တွေ့ ရတယ်။ စာလုံးပုံစံကို ယူတာဆိုတော့ တခြား Langauge တွေနဲ့ လည်း ထည့်ကြည့်ရင်လည်း ရမယ်ထင်ပါတယ်။
ထွက်လာတဲ့ ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး သဘောကျသွားတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 10/29/2008 01:07:00 PM7comments
Source : kingofgng.com
Other Related Link: Google's Chrome Browser
Credit to My Love
Posted by Nay Nay Naing at 10/28/2008 03:49:00 PM3comments
အခုရက်ပိုင်းလုံးဝ မအားဘူး။ အရမ်း အရမ်းကို အလုပ်ရှုပ်နေတယ်။ Halloween က နီးလာပြီ။ ညတိုင်း ညတိုင်း အ၀တ်အစား ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ ၀တ်၊ အိမ်တွေရှေ့ သွား တံခါးခေါက်ပြီး Trick-or-treating လုပ်နေတယ်။ တချို့ညတွေများဆို ၃-၄ နာရီ လောက်မှ အိပ်ဖြစ်တယ်။
Trick-or-treating ဆိုတာ ဒီအချိန် Halloween ရာသီမှာပဲ လုပ်လို့ ရတာမဟုတ်လား။ ဒီတော့ တခြားဟာတွေထက်စာရင် Trick-or-treating သွားခြင်းကို ပထမ ဦးစားပေး အနေနဲ့လုပ်နေပါတယ်။ ညည အိမ်ရှေ့ တွေသွား တံခါးခေါက်လိုက်ရင် တချို့ အိမ်တွေကတော့ သဘော အရမ်း ကောင်းတယ်။ တံခါးသွားခေါက် လိုက်ရုံနဲ့သကြားလုံးတွေ၊ တခြား လက်ဆောင်တွေ တစ်ခု မဟုတ်တစ်ခု ပေးတယ်။ တချို့အိမ်တွေကြတော့ သူတို့ ကို လက်ဆောင် ပေးမှ ကိုယ့်ကို လက်ဆောင်ပြန်ပေးတယ်။ တချို့ အိမ်ရှင်မှာတော့ အိမ်ရှင်တွေ ဗိုက်ဆာနေလို့သူတို့ ကို အစာအရင်ကျွေးပြီးမှ ကိုယ့်ရမယ့် လက်ဆောင်လေးကို ယူလို့ ရတယ်။ သူ့ စီက တစ်ခုလိုချင်ရင် ကိုယ့်စီက တစ်ခု အရင်ပေးရတဲ့ သဘောပေါ့။ တချို့ အိမ်တွေက ဘာဆို ဘာမှ မပေးဘူး။ စိတ်ပုတ်တယ်။ ကိုယ့်အိမ်ကို လာလည်တာပဲ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုတော့ ပေးသင့်တာပေါ့။ ဒီလို ဘာမှ မပေးတဲ့ အိမ်က များတယ်။ လက်ဆောင်တစ်ခုခု ပေးတဲ့ အိမ်ကို တွေ့ အောင် အတော်လေး ကြိုးစားပန်းစား အချိန်ပေးသွား အိမ်တံခါးတွေ လိုက်လိုက် ခေါက်နေရတယ်။
ပထမတော့ အပျော်ပေါ့။ Trick-or-treating သွားရင်း သကြားလုံးလေးတွေ၊ စားစရာလေးတွေ၊ လက်ဆောင်လေး တွေရရင် ပျော်တယ်၊ စိတ်ချမ်းသာတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ လောဘက တတ်လာတယ်။ ဒီလို လက်ဆောင်ကလေးတွေ တင်မကဘူး တခြား အရာလေးတွေကိုပါ လိုချင်လာတယ်။ အိမ်တွေ လျှာက်သွားရင်း လက်ဆောင် အခု ၁၀၀ ရခဲ့မယ်ဆို.. အလကား ပေးမယ့် အရာလေး လိုချင်လာတယ်။ ပထမ လက်ဆောင်အရ နည်းနေတုန်းသာ ၃-၄ အိမ်လည်ရင် တစ်အိမ်လောက်က လက်ဆောင်ပေးတယ်။ တစ်ညအတွက် လက်ဆောင်ရတဲ့ ပမာဏက များနေပြီဆို သူတို့ က မပေးချင်တော့ဘူး။ အိမ် ၂၀ လောက် တံခါးခေါက်တောင် လက်ဆောင်တစ်ခု မရတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ရမလဲ။ မလျှော့သောဇွဲနဲ့ကြိုးစားပြီး အိမ်တွေတံခါးလိုက် ခေါက်တာ ၂ ည အတွင်း ၁၀၀ ပြည့်လို့အလကားပေးတဲ့ဟာလေး ရသွားတယ်။ ဒီနေရာမျိုးဆို ဇွဲကတော့ ကြီးသလားမမေးနဲ့ ။
ဒီအလကား ရတဲ့ လက်ဆောင်လေးရသွားပြီး တော်ပြီလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ ၂၀၀ နဲ့ လဲလို့ ရမယ့် ဟာလေး လိုချင်ပြန်ရော။ ငွေပေး ရွှေပေး ၀ယ်လို့ မရ၊ အကောင်လေးကလည်း ချစ်စရာလေးမို့လိုချင်မိတာပါ။ ဒါနဲ့ဆက်ကြိုးစားလိုက်တာ ၄ ရက်မြောက်နေ့ မှ ၂၀၀ ပြည့်လို့လဲလို့ ရသွားတယ်။ တစ်ခု ရတော့ မကျေနပ်ပြန်ဘူး၊ နှစ်ခု လိုချင် ပြန်ရော။ ကိုယ့်အတွက် တစ်ခု၊ တစ်ခြားတစ်ယောက်အတွက် တစ်ခု။ ခွဲခြား ခွဲခြား မလုပ်ချင်ဘူးလေ။ ဒါနဲ့၂ ခု ရအောင် ကြိုးစားလိုက်တယ်။
အင်း အခုတော့ လိုချင်တာ နှစ်ခုလုံး ရသွားပြီ။ တခြား လောဘတွေ တက်မလာခင် Trick-or-Treating သွားခြင်းကို ခေတ္တခန ရပ်ပြီး ဒီဘက်ကို တစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်မိလိုက်လို့ဒီဟာလေးကို ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ရက်တွေ ကျွန်မ ပျောက်နေရင် … တခြား ကိစ္စကြောင့်မဟုတ်ပဲ… အိမ်လည် ထွက်နေခြင်း၊ Halloween အတွင်း Trick-or-Treating သွားနေခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်ကြောင်း သူငယ်ချင်းအပေါင်းကို သိစေအပ်ပါတယ်…
၁၀၀ ပြည့်တုန်းက ရတဲ့ လက်ဆောင်
၂၀၀ နဲ့ လဲလို့ ရတဲ့ အကောင်လေး
ညတိုင်း ညတိုင်း ဒီလို ပိတ်ထားတဲ့ အိမ်တံခါးတွေကို သွားသွား ခေါက်ရတယ်..
ဘာမှ လက်ဆောင်မပေးတဲ့ အိမ်
On noes! It'satrick! :(
လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အိမ်ရှင်က ဒီလိုမျိုးလေး ထွက်ပေးတယ်..
A treat for you! ^___^
Trick-or-treatingက 1st November အထိ လုပ်လို့ ရတယ်။ Halloween ပြီးရင် Thanksgiving လာပါတယ်။ Thanksgiving ပြီးရင် New Year လာမယ်။ New Year ပြီးရင်.. တခြားတစ်ခု ဆက်လာ အုံးမယ် ထင်ပါတယ်.. လိုချင်တာတွေ ၀ယ်ဖို့ ကလည်း ငွေတွေ ရွှေတွေ ရှာရအုံးမယ်.. တကယ်ပါ.. ကျွန်မ နောက်ရက်ပိုင်းတွေမှာပါ ဆက်ပြီး ပျောက်နေနိုင်ပါသေးတယ်.. အခြေအနေအရပေါ့..
Labels: Day, Diary, Fun
Posted by Nay Nay Naing at 10/27/2008 03:23:00 PM 8 comments
လန့် နိုးမသွားခင် အချိန်ထိတော့
ဒီထက်ပိုပြီး ဆုံးရှုံးသွားမှာစိုးလို့ 
ကလျာမဂ္ဂဇင်း၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈
Posted by Nay Nay Naing at 10/23/2008 11:54:00 AM6comments
Posted by Nay Nay Naing at 10/21/2008 11:24:00 AM6comments
အသီးမှာ သရက်၊ အသားမှာ ၀က်
သရက်သီးစိမ်း ၊ နွယ်ချို၊ ငရုတ်သီးမှုန့် ၊ သကြား၊ ဆား
သရက်သီးစားချင်စိတ်ပေါ်တာ နဲ့ဆိုင်မှာ သွားဝယ်ဖြစ်တယ်။ သရက်သီး အမှည့်၊ သရက်သီး အစိမ်း၊ သရက်သီး အကင်း ကြိုက်တာဝယ်လို့ ရတယ်။ အစိမ်းပဲ စားချင်တာ နဲ့သရက်သီး အစိမ်း ၂ လုံး ၀ယ်လာခဲ့တယ်။ ပထမ သရက်သီးကို အစိတ်လေးတွေ စိတ်ပြီး စပ်ထားတဲ့ အမှုန့် နဲ့တို့ စားတယ်။
အမှုန့် ကို ရသာချို လို အဆင်သင့် စပ်ထားပြီးသား အမှုန့် တွေ မကြိုက်ဘူး။ ကိုယ်ဘာသာ လုပ်ပြီး စားတယ်။ နွယ်ချိုမှု့န် နဲ့ငရုတ်သီးအကျက် လှော်ထားတာကို ရန်ကုန်က အမြဲ ပို့ ပေးထားပါတယ်။ နွယ်ချို့ မှုန့် က ပရဆေးဆိုင်က ၀ယ်လေ့ရှိပြီ၊ ငရုတ်သီးမှုန့် ကိုတော့ အပြင်က ၀ယ်လေ့မရှိတဲ့ အိမ်မှာ လုပ်တာလို့သိရတယ်။ ကျွန်မတို့ အိမ်မှာ လုပ်တာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး။ ကြီးတော်ကြီးတွေ အိမ်မှာ ဖြစ်မယ်။ အဲဒီအမှုန့် တွေကို ဆားနဲ့သကြား ရောပြီး ကျွန်မ ကြိုက်တဲ့ အရသာ ရအောင် စပ်ပြီး စားလေ့ရှိတယ်။ ရန်ကုန် အိမ်တုန်းကဆို အဲဒီလို အမှုန့် တွေကို စပ်ပြီး ပုလင်းနဲ့ထည့်သိမ်းထားတယ်။ အချဉ်စားချင်တဲ့ အခါ ရှိတဲ့ အသီး (ရာသီကို လိုက်ပြီး သရက်၊ မရမ်း၊ ရှောက်သီး) စတာတွေနဲ့စားလေ့ရှိတယ်။ ကျွန်မ က အချဉ်ကြိုက်ပေမယ့် အပြင်မှာ ရောင်းတဲ့ အချဉ်ထုတ်တွေ သိပ်မစားတတ်ဘူး။ မကြိုက်ဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ လုပ်စားတယ်။ မရမ်းသီး ပေါ်တဲ့ ရာသီဆို မရမ်းသီးစိမ်းကို သကြား၊ ဆားရည်၊ တခါတလေ အမေခွင့်ပြုရင် ဆေးသကြား တစ်ခဲလောက် ထည့်ပြီး ပုလင်းနဲ့တည်၊ ကိုယ်ကြိုက်လောက်တဲ့ အနေရမှ စပ်ထားတဲ့ အမှုန့် တွေနဲ့ စားတယ်။ တခါတလေ လည်း ငံပြာရည်၊ ငရုတ်သီး စတာတွေနဲ့သုတ်စားတယ်။
ဒီနေ့ လည်း အဲဒီလို သုတ်စားချင်စိတ်ပေါ်တာနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ သရက်သီးစိမ်းကို သေးသေးလေးတွေ ဖြစ်အောင် ပေါက်(လှီး)ပြီး စပ်စပ်လေး သုတ်စားတာ။ စားလို့ ကောင်းသား။ တခါတလေ စိတ်ကူးပေါက်ရင် ဒီလိုပဲ လုပ်စားပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 10/19/2008 03:45:00 PM 13 comments
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ဒီနေ့အလုပ်မှာ တစ်နှစ်တရက် လုပ်နေကြထုံးစံအတိုင်း တစ်ရုံးလုံး အင်္ကျီဆင်တူဝတ်ရတဲ့ နေ့ဆိုတဲ့အကြောင်း ရေးမလို့ ပါ။ သိပ်တို့ မထူးခြားပါဘူး။ အင်္ကျီ ဆင်တူ ၀တ်ပြီး ဘာလုပ်ရလဲဆို Department အလိုက် ဓာတ်ပုံစုပြီး ရိုက်ရတယ်၊ ပြီးတော့ ဘယ် Department က ဓာတ်ပုံပါဆိုပြီး အီးမေးကတစ်ဆင့် တစ်ရုံးလုံး ပို့ တာကလွဲရင် ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား လုပ်ရတာ မရှိဘူး။ တစ်နှစ်ကို တမျိုး မရိုးအောင်ပေးတဲ့ အင်္ကျီကလည်း ဒီတစ်ရက်ပဲ တခြားနေ့ တွေမှာ ၀တ်လာခဲ့ဖို့မှာတာ ခုချိန်ထိ မကြုံဖူးသေးဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်မတို့ တွေက ဒီနေ့ဝတ်ရတဲ့ အင်္ကျီကို ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ဝတ်ရတဲ့ အင်္ကျီ နဲ့ဒီနေ့ ကို အလုပ်ကလူတွေစုပြီး တစ်နှစ်တစ်ခါ ဓာတ်ပုံရိုက်ရတဲ့ နေ့ လို့ပဲ လွယ်လွယ်ခေါ်လိုက်တယ်။ ဒီနှစ် အတွက် အရောင်က အနီရဲရဲ။ Design က ရိုးရိုးရှင်းရှင်း။
ဒီလို ဆင်တူ တစ်နှစ်မှာ တစ်ခါ ဘာကြောင် ဘာလို့ဝတ်ခိုင်းတယ်၊ ဘာညာ ပြောပေမယ့် စိတ်မ၀င်စားတာနဲ့မှတ်မထား မိဘူး။ ဒါမျိုးတွေကို မြန်မာပြည်မှာကတည်းက နားထောင်ရလွန်းလို့ရိုးနေပြီ။
ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ နေ့ ဆိုတော့ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ထားသေးတယ်..... ဒီနေ့ ရိုက်ဖြစ်တဲ့ ထဲက ပုံတချို့ ..
(အခုအောက်မှာ ရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအားလုံးကို ရိုက်တဲ့သူက ကျွန်မဆိုတော့ ပုံတွေထဲမှာ ကျွန်မပုံ ပါမှာမဟုတ်ဘူး။ လိုက်ရှာရင် မောမှာစိုးလို့ကြိုပြောထားတာပါ။ )
Red Polo Tee
နေ့ လယ်စာသွား စားတုန်းက ရှေ့ က သွားတဲ့ သူတွေကို ရိုက်ထားတာ။
Before taking ITCA Department Group Photo
၂၀၀၈ နဲ့၂၀၀၇ အတွက် အင်္ကျီနှစ်ထည်။
ဒီနေ့ အကြိမ်အများဆုံး အမေးခံရတဲ့ မေးခွန်းက ၀တ်ထားတဲ့ TShirt ရဲ့ Size က ဘာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Labels: Day, Job, Singapore
Posted by Nay Nay Naing at 10/17/2008 10:23:00 PM 10 comments
Posted by Nay Nay Naing at 10/16/2008 11:09:00 PM4comments
** Return to innocence **
အသံ အရုပ် နဲ့သီချင်း စာသားတွေပါ ခံစား နားထောင်ကြည့်ပါ။
သီချင်းတွေ နားထောင်ခြင်းဟာလည်း စိတ်သက်သာမှု့ ၊ စိတ်ကြည်လင်မှု့ ၊ စိတ်ချမ်းမြေ့မှု့ ကို ရစေနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်မ ဘလော့ကို အမြဲ ဖတ်လေ့ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် က သူ အမြဲနားထောင်လေ့ရှိတဲ့ သီချင်း၊ နားထောင်ကြည့်ပါ။ ကြိုက်မယ် ထင်တယ် ဆိုပြီး ညွန်းလာတာနဲ့ဒီသီချင်းကို နားထောင်ဖြစ်သွားတယ်။ အရင်က ဒီသီချင်းကို မသိခဲ့ဘူး။ YouTube မှာ နားထောင်ကြည့်ရင်း ကြိုက်သွားတာနဲ့mp3 ပါ ရှာပြီး သိမ်းထားဖြစ်သွားတယ်။
Credit to Htoon
Posted by Nay Nay Naing at 10/16/2008 11:34:00 AM2comments
စိတ်မပါပဲ စကား ဆုံနေရတယ်။
သရဖူမဂ္ဂဇင်း၊ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈
Posted by Nay Nay Naing at 10/15/2008 02:13:00 PM6comments
Mac Notebook အသစ်ဒီနေ့ထွက်မယ်ဆိုလို တရေးနိုးထကြည့်တာ။ Online ဖြစ်ဖြစ်သွားချင်း ကျွန်မစီကို ပထမဆုံး ၀င်လာတဲ့ Message က Apple ဆိုဒ်သွားကြည့်လိုက်တဲ့... အိပ်မပျော်လို့ လား.. ဘာလာညာလာ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မေးမနေတော့ဘူး... ကျွန်မ အိပ်ယာက ဒီအချိန်ကြီးထပြီး အွန်လိုင်းဝင်လာတာ ဘာအတွက် ကြောင့်လဲဆိုတာ သိနေတာပဲ..
ပြောတဲ့အတိုင့်း Apple Mac ကြည့်လိုက် တယ်။ ပြီးတော့ engadget.com မှာ သွားဖတ်ကြည့်တယ်။ တခြားပေးတဲ့လင့်တွေ ကြည့်တယ်။ Galleries ထဲသွားပြီ ဓာတ်ပုံတွေ အသေအချာကြည့်တယ်။ Notebook အသစ်တွေက အလူမီနီယံနဲ့ လုပ်ထားပြီး ပိုပါးသွားတယ်။ Multi-touch glass trackpad ပါတယ်။ Nvidia chipset ကိုသုံးထားလို့Graphic အရင်ကထက် အများကြီး ပိုပြီး ကောင်းတယ်။
Apple's all-new MacBook Pro packs new NVIDIA GPUs, glass trackpad
Apple MacBook aluminum and glass super-shiny hands-on
ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်း Mac Notebook ၀ယ်ချင်တဲ့ ရောဂါ ပြန်တတ်လာတယ်။ သတင်းတွေထွက် နေတဲ့အတိုင်း အရင်မော်ဒယ်ဟောင်း 13-inch MacBook (2.1GHz) ဈေးက ၁၀၀၀ အောက် ၁ ဒေါ်လာလျှော့ပြီး ၉၉၉ ဖြစ်သွားတာပဲ။ အဟောင်းတော့ မလိုချင်ဘူး.. ၀ယ်မယ့်ဝယ် အသစ်ထွက်တာလေးပဲ လိုချင်တယ်..
ပထမ စဉ်းစားလိုက်တယ်။ new 13-inch MacBook (2.0GHz) က $1,299.00 ဆိုတော့ မဆိုးဘူး .. တန်တယ်။ ၀ယ်ရင်ကောင်း မလားပေါ့။ Specs တွေ လိုက်ဖတ်ကြည့်တော့ 13-inch (2.0GHz) မှာ illuminated keyboard မပါတာတွေ့ လိုက်ရတယ်။ 13-inch (2.4GHz) မှာ မှ illuminated keyboard ပါတယ်။ ၀ယ်မယ့်မယ် Features အစုံပါတာလေး ရချင်တာမို့new 13-inch MacBook (2.4GHz) $1,599.00 ကို ပဲဝယ်ရင် ကောင်းမလား။ ၁၆၀၀ ကျော်သုံးပြီးမှ တော့ မထူးတော့ဘူး။ နောက်ထပ် ၄၀၀ လောက်ထပ်ထည့်လိုက် မယ်ဆိုရင် new 15-inch MacBook Pro (2.4GHz) ရနိုင်တယ်။ $1,999.00 တန် 15-inch MacBook Pro (2.4GHz) ကလေး ၀ယ်လိုက်ရင်ကောင်းမလား... ဘာဝယ်ရင်ကောင်းမလဲ... အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ စဉ်းစားပြီးနောက် ခေါင်းရှုပ်သွားတာကြောင့် ပြန်အိပ်တာပဲ ကောင်းပါတယ် ဆုံးဖြတ်ပြီး ပြန်လည် အိပ်စက် အနားယူ ပါတော့မယ်...
Posted by Nay Nay Naing at 10/15/2008 03:45:00 AM3comments
ငယ်ငယ်ကတည်းက နားထောင်ခဲ့ရတဲ့ ပုံပြင်တွေ... အခုအချိန်အထိလည်း နားထောင်နေရတုန်းပဲ..
ကလေးဘ၀ကတော့ လူကြီးတွေ ပြောပြခဲ့တဲ့ ပုံပြင်တွေကို ကြိုက်ခဲ့တယ်... အခုတော့ ကြားနေရတဲ့ ပုံပြင်တွေ ငြီးငွေ့ လာပြီ..
ပုံပြင်တွေကို မကြားချင်ဘူး.... နားမျက်စိတွေ ပိတ်မထားနိုင်တော့.. ကြားနေရပြန်တယ်..
ကဲ.. ရှောင်မရ အတူတူ.. နားထောင်သူ တစ်ယောက် မလုပ်တော့ဘူး.. ကိုယ်တိုင် ပုံပြောသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ပဲ ကြိုးစားတော့မယ်..
ကိုယ်ဟာ ပုံပြောကောင်းသူ တစ်ယောက် ဖြစ်လာ နိုင်သလား.. ဖြစ်လာ မလား...
ဘယ်သူတွေ နားထောင်နေလဲ... နားထောင်သူ မရှိလဲ.. ပုံပြင်တွေ ပြီးဆုံးတဲ့အထိတော့ ဆက်ပြောနေရအုံးမှာပဲ..
အခု ... ကိုယ်ပုံပြောနေတယ်..
Posted by Nay Nay Naing at 10/14/2008 02:10:00 PM2comments
ဒီနေ့တနင်္လာနေ့ .. မနေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့ ). နေ့ လယ်စာ စားပြီးကတည်းက အိပ်လိုက်တာ ညစာပါ လွတ်သွားတယ်... ဘယ်လို ဘယ်နှယ်ကြောင့် ဒီလောက်ထိအောင် အိပ်နိုင်သွားသလဲ စဉ်းစားမရဘူး.. အံ့သြဘာရဲ့..
ဒီမနက် အလုပ်ရောက်မှ မနေ့ က ညစာ နဲ့ဒီနေ့ မနက်စာ ပေါင်းစား ဖြစ်သွားတယ်။ စားလိုက်တဲ့ မနက်စာ များသွားလို့လား၊ မနေ့ က အိပ်ထားတဲ့ အရှိန်မသေသေးလို့ လား မသိဘူး တမနက်လုံး အိပ်ချင်နေတယ်။ အလုပ်လေး လုပ်လိုက် စာလေးဖတ်လိုက် နဲ့၁၂ နာရီ ထိုးတာတောင် သတိမထားမိ လိုက်ဘူး။ ထမင်းသွားစာဖို့ လာခေါ်တာကို မလိုက်တော့ဘူး ငြင်းလိုက်တယ်။ အစာမစားချင်ပဲ အိပ်ချင်စိတ်ပဲ ရှိနေတယ်။ နောက်ဆုံး ဒီတိုင်းထိုင်နေလို့ မဖြစ်ဘူး တစ်ခုခုစားမှ ဖြစ်မယ်တွေးမိတာနဲ့၁ နာရီလောက်မှ ထမင်းစားထွက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ မိုးကလဲ နည်းနည် အုံ့ နေတယ်။ လူကလည်း မလန်းဘူး။ ထမင်း မစားချင်ဘူး။ ဒါနဲ့ပူပူလောင်လောင် တစ်ခုခုစားမယ် ဆုံးဖြတ်ပြီး Bak Kut Teh သွားစားဖြစ်ခဲ့တယ်။
Spare Ribs Soup + Rice
စားလို့ ကောင်းတယ်။ ဟင်းရည်က ပူပူ၊ အသားဖတ်တွေကို ငရုတ်သီးလေးနဲ့ စားလိုက်တော့ လူပါပွင့်သွားပြီး အာတွေလျှာတွေ ပူသွားလို့အအေး ၁ ခွက်နဲ့ မ လောက်ပဲ ၂ ခွက်မှာ သောက်လိုက်ရတယ်။ အဲဒီဆိုင်က ငရုတ်သီက အတော်လေး စပ်တယ်။ စားတိုင်း မျက်ရည်ကျလုနီးပါး မနေနိုင် မထိုင်နိုင်ဖြစ်အောင် စပ်တယ်။ ဒါလည်း အမှတ်မရှိဘူး စားတာပဲ။ တခြားနေရာမှာသာ ငရုတ်သီး သိပ်မစားဖြစ်တာ၊ စားရင်တော့ ငရုတ်သီး အမြဲစားဖြစ်တယ်။ အဲလို စားမှ အရသာရှိတယ် ထင်တယ်လေ။
ဒီဆိုင်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားစားရင် သူတို့ တွေက Lunch Set ကို မှာစားလေ့ရှိတယ်။ လာစားသူ တော်တော်များများ ကလည်း Set Meal တွေပဲ မှာစားကြတယ်။ ကျွန်မက Set Meal မှာပါတဲ့ အီကြာကွေး၊ မှိုခြောက်၊ ငံတန်တန် တို့ ဖူးပြား တွေကို မကြိုက်လို့ရိုးရိုးပဲ မှာစားလေ့ ရှိတယ်။ ရိုးရိုးမှာ စားတာနဲ့Set Meal နဲ့ က ဈေးသိပ်မကွာဘူး။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန် ဟာတွေက အသားပိုများတယ်။ Set Meal က အပိုပါ တာတွေ မကြိုက်တဲ့ အတူတူ အသားများတဲ့ ပုံမှန် ဟာတွေပဲ မှာ စားဖြစ်တော့တယ်။ Bak Kut Teh ကို ကျွန်မသူငယ်ချင်းတစ်ချို့ က မကြိုက်ကြဘူး။ ကျွန်မကတော့ ပူပူလောင်လောင် အဆီမပါတဲ့ ဟင်းခါးမျိုးတွေ ကြိုက်တတ်လို့ လား မသိဘူး အတော်လေး ကြိုက်တယ်။ စားလို့ ဝင်တယ် ပေါ့လေ။ ထမင်းမစားချင်တဲ့ အခါတွေဆို စားတတ်တယ်။ မြန်မာအစားအသောက်ဆို ရခိုင်မုန့် တီတို့ကြာဇံဟင်းခါးတို့ကြိုက်တယ်။
ဒီပုံက ဟိုတစ်ခါသွားစားတုန်းက သူငယ်ချင်းရိုက်ထားတဲ့ပုံ.. သူငယ်ချင်းစီက ယူထားတာ
Spare Ribs Soup ဒါမှမဟုတ် Pork Ribs Soup တစ်ခုခုမှာ စားလေ့ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ ၀က်သား၊ ၀က်သားလုံး၊ ၀က်နံရိုး၊ ၀က်ကလီစာ မျိုးစုံ (အူ၊ အသည်း၊ကျောက်ကပ်) အကုန် ရှိတယ်။ နောက်ပြီး ၀က်မြှီး လဲရှိတယ်။ ၀က်မြှီးကို သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် မှာ စားဖူးလို့ သိနေတာ။ အဟား... အရင် စလုံးရောက်ခါစက Ox Tail Soup ရှိတယ်၊ ဒီကလူတွေ ကြိုက်ကြတယ် ကြားဖူးတုန်းက အတော်လေး အံ့သြသွားတာ။ အခု တခါ Pig Tail Soup..
ဒီနေ့ပိုက်ဆံပေးဖို့စောင့်နေရင်း ဘေးဝိုင်းက ထသွားတာနဲ့လက်အငြိမ်နေ ရိုက်လိုက်တာ။ အရင်အခါတွေက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စားလေ့ရှိတာဆိုတော့ အဲဒီဆိုင်က လူတွေ အင်္ဂလိပ်လို မပြောတတ်တာကို သတိမထားမိဘူး။ ဒီနေ့ပိုက်ဆံရှင်းမယ်လုပ်မှာ ဆိုင်ရှင် တရုတ်မက ဘယ်လောက်ကျတယ် ဆိုတာကို တရုတ်လိုတွေ ပြောတယ်။ ကျွန်မကလည်း နားမလည်။ သူကလည်း အင်္ဂလိပ်လို Seven တစ်လုံးပဲ ပြောတတ်တယ်။ ၁၀ တန် ထုတ်ပေးတာကို တစ်ခုခု ထပ်ပြောနေတယ်။ အကြွေတောင်းတာ ဖြစ်နိုင်လို့ရှိသမျှ အကြွေ ချပြလိုက်မှ ၁၀ ပြား ယူသွားပြီး S$3 ပြန်လာအမ်းတယ်။ တကယ်က S$7.10 ကျတာ။ တကယ်ပါပဲ။ မှာတုန်းက ခပ်လွယ်လွယ် Menu က ပုံကို ထောင်ပြလိုက်တာဆိုတော့ ကိုယ့်စကား သူနားမလည်၊ သူ့ စကား ကိုယ်နားမလည်တာကို သတိမထားမိလိုက်ကြဘူးလေ ...
For Delivery , Please call 65344118
ဒီပိုစ့်ရေးရင်း Google ကြည့်တာ အဲဒီဆိုင်က blogspot မှာ ဘလော့ ရှိနေတာကို တွေ့ ရတယ်။ UpdateToDate တော့ဖြစ်နေဘူး။ ဈေးက အဒီထဲက Menu ကထက် S$1 ကျော်ကျော်ဈေးတတ်နေပြီ။ အရင်က NTU students တွေအတွက် ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့Deliver ရှိခဲ့မှန်း ဘလော့ဖတ်မှ သိလိုက်ရတယ်။ အခုတော့ Deliver ကို ရပ်ထားတယ်။ ဘာလို့ လဲတော့ မသိ... Imperial Bak Kut Teh (Blogspot)
Lunch Set အကြောင်း ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တခြားသူတွေ ရေးထားတဲ့ အကြောင်းတွေ ဖတ်ချင်၊ သိချင်တယ် ဆို.
Imperial Bak Kut Teh in Japanese Bento Style
မှာ သွားကြည့်နိုင်တယ်။ ဒီဆိုင်လည်း လူသိများ၊ လူကြိုက်များတဲ့ ဆိုင်တစ်ခု နဲ့ တူပါတယ်။
Bak Kut Teh ဆိုလို့အမှတ်ရစရာ တစ်ခုက ... ဒီနိုင်ငံရောက်ခါစ Bugis Junction နားက Office မှာ အလုပ်လုပ်တုန်းကဆို အဲဒီနားမှာရှိတဲ့ Bak Kut Teh ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ခနခနသွားစား ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်မ တူနဲ့ မစားတတ်ဘူး။ တူကို လုံးဝ မကိုင်တတ်တာ။ (အခုလည်း သိပ်မကိုင်တတ်သေးပါဘူး)။ ဒီတော့ ဇွန် နဲ့ခရင်း စားမှ စားလို့ ရတယ်။ ကျွန်မ အမြဲမှာလေ့ရှိတာက Pig Trotter နဲ့Bak Kut Teh ။ ဘယ်တော့မှ မပြောင်းလဲဘူးလေ။ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဇွန် နဲ့ ခရင်း မှာ လေ့ရှိလို့ လား၊ ခနခန လာစားတတ်လို့လား၊ မှာတိုင်း ဘယ်တော့မှ မပြောင်းလဲလို့ လား မသိဘူး အဲဒီဆိုင်က လူတွေ ကျွန်မကို မှတ်မိနေတယ်။ ဟိုတလောက လမ်းကြုံတာနဲ့ သွားစားမလားလို့ ကြည့်တာ အဲဒီဆိုင်မရှိတော့ဘူး။ အခုတော့ တူနဲ့စား တတ်လာပါပြီ.... ဟိုအရင်တုန်းက အမှတ်ရစရာ တစ်ခုပေါ့....
Posted by Nay Nay Naing at 10/13/2008 04:03:00 PM6comments
စိတ်မပျက်ပဲနဲ့ဝမ်းနည်း အားငယ်မနေပါနဲ့ .. ချစ်သူခင်သူ မိတ်ဆွေများဟာ ကိုယ်အတွက် အမြဲ ရှိနေမှာပါ...
ဒီသီချင်းလေးကို နားထောင်ပြီး သတိရလိုက်ပါ..
ဘယ်အချိန် နားထောင် နားထောင် ခံစားမှု့ တစ်ခု၊ အားအင် တစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ သီချင်း တစ်ပုဒ်ပါပဲ။ နှစ်သက်လွန်းလို့အကြိမ်ကြိမ်နားထောင်ဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် အနှောက်အယှက် ဖြစ်စရာတွေ ကြုံတဲ့ အချိန်တွေ၊ တစ်ယောက်တည်း ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေသလို ခံစားရတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဒီသီချင်းလေး နားထောင်မိရင် စိတ်သက်သာရာ ရသွားသလိုပဲ။ ကျွန်မကို နားလည်တဲ့၊ ကျွန်မဘက်က ထာဝရ အမြဲရပ်တည် အားပေးနေမယ့် ကျွန်မရဲ့ မိဘတွေ၊ ကျွန်မရဲ့ ချစ်သူ နဲ့သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာကို အမြဲအမှတ်ရသွား စေတယ်။
The Pretenders - I will stand by you
Girls Aloud - I will stand by you
Carrie Underwood - I will stand by you
I'll stand by you; I'll stand by you
ဒီသီချင်းကို ပထမဆုံး သီဆိုခဲ့တဲ့ သူက The Pretenders ။ ၁၉၉၄ မှာ သီဆိုခဲ့တာပြီးဖြစ် Single အနေနဲ့အတော်လေး နာမည်ကြီးခဲ့တယ်။ ဒီသီချင်းကို UK က Girls Aloud အဖွဲ့(2004) နဲ့US က American Idol (season 4) ဆုရ Carrie Underwood (2007) တို့ ပြန်ဆိုတဲ့ အခါတွေမှာလည်း UK/US နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ထိပ်ဆုံးအဆင့်တွေကို ရောက်ခဲ့တယ်။ ပြန်ဆိုတဲ့ အကြိမ်တွေတိုင်းဟာ Charity Single အခွေအနေနဲ့ထုတ်ဝေခဲ့တာပါ။
Version3မျိုးလုံးကို အကြိမ်များစွာ နားထောင်ဖူးတယ်။ The Pretenders နဲ့Carrie Underwood ဆိုတဲ့ ဗာရှင်းတွေကို ပိုပြီး ခံစားလို့ ရပါတယ်။ သီချင်းတွေကို နှိုင်းယှဉ်နားထောင်ကြည့်လို့ ရအောင် အပေါ်မှာ ပေးထားပါတယ်။ နောက်ပြီး သူတို့ ရဲ့ Official MTV တွေကြည့်ချင်တယ်ဆို ကြည့်လို့ ရအောင် အောက်မှာ လင့်တွေရှာပေးထားတယ်။ ခံစားကြည့်ကြပါ။
့The Pretenders - I will stand by you (MTV)
Girls Aloud - I Will Stand By You (MTV)
Carrie Underwood - I'll Stand By You (MTV)
Posted by Nay Nay Naing at 10/11/2008 02:30:00 PM2comments
ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေ ကြည့်နေရတာ စိတ်ချမ်းသာဖို့အရမ်းကောင်းပါတယ်..
အချိန်ရရင် ရသလို Google နဲ့Yahoo က Image Search တွေကို သုံးပြီး ပုံတွေလိုက်ရှာကြည့်နေဖြစ်တယ်...
ကျွန်မလိုပဲ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဓာတ်ပုံ လှလှလေးတွေ လိုက်ရှာကြည့်ရှု့ ရခြင်းကို နှစ်သက်သူများ နှင့် Photography ၀ါသနာပါသူများ အတွက်...
Interestingness - the power of attracting or holding one's attention
interes.tingness.com : Flickr မှာ တင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ဆွဲယူပြီး Photo Wall တစ်ခု အနေနဲ့ ပြပေးတဲ့ နေရာ တစ်ခုပါ။ နေ့ စွဲ အလိုက် တည်ဆောက်တဲ့ Photo Wall တစ်ခုစီမှာ ပုံ ၅၀၀ ကျော် ပါရှိတယ်။ ပထမဆုံး ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ အတွက် Photo Wall ကို ပြပေးပါတယ်။ အရင် နေ့ တွေက Photo Wall ကို ကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင်လည်း Dateကို ပြောင်းပြီး ကြည့်လို့ ရတယ်။ ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ ပုံသေးလေးပေါ်ကို Click လုပ်လိုက်ရင် မူရင်းပုံ ဆိုဒ်အကြီးကို ပြပေးပါတယ်။ တဆက်တည်း မူရင်း Flickr Link (Visit Contributors) ကိုပါ ပေးထားလို့အဲဒီဓာတ်ပုံကို တင်ထားသူရဲ့ Flickr အကောင့်မှာ ရှိနေတဲ့ တခြားဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း စိတ်ဝင်စားရင် စိတ်ဝင်စားသလို လိုက်ရှာကြည့် နိုင်ပါတယ်။
Photo Wall အတွက် ပုံတွေကို ရွေးထုတ်ရာမှာ Interestingness Algoritham (Flickr API) ကို သုံးပြီး ဖော်ပြတယ်လို့သိရတယ်။ Interestingness Algoritham ဆိုတာလာလဲ စိတ်ဝင်စားလို့နည်းနည်း လိုက်ဖတ်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ Google က Website တွေကို Page Rank ပေးသလိုပဲ Flickr ကလည်း သူစီမှာ တင်ထားတဲ့ ပုံတွေကိုလည်း Interestingness ဆိုပြီး ပုံကိုကြည့်တဲ့ အရေအတွက်၊ ကွန်မန့်အရေအတွက်.. favourite အနေနဲ့add ထားတာ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ.. စသည်ဖြင့် အချက်အလက် အတော်များများ ပေါ်မူတည်ပြီး Rank ပေးတယ် သိရတယ်။ ခုမှ သိတော့တယ်။ read more ...
A Daily Dose Of Interesting Photographic Inspriation from Flickr
interes.tingness.com မှာ ပထမဆုံး Photo Wall စတင်တဲ့ နေ့ က 1st June 2004 လို့ ဖတ်လိုက်ရလို့ ... ပြောထားတဲ့ အတိုင်း ဟုတ်မဟုတ် သိချင်လို့အဲဒီနေ့ ထက် စောတဲ့ နေ့ထည့်ကြည့်တာ မရဘူး။ အစောဆုံး 07-01-2004 (mm-dd-yyyy) ကိုပဲ လက်ခံတယ်။ ဘာရယ်မဟုတ် အကျင့်ပါနေတာနဲ့စမ်းကြည့်မိသွားတာပါ :"> Photo Wall (07-01-2004) မှာပါတဲ့ ပုံတွေက ခုနောက်ပိုင်းရက်စွဲက ပုံတွေလောက် မလှဘူး။ အဲဒီ အချိန်တုန်းက Flickr ကို သုံးတဲ့သူ နည်းပြီး၊ အခုနောက်ပိုင်းမှ လူသုံးများလာတာကြောင့် ပုံကောင်းကောင်းတွေ များလာတာ ဖြစ်မယ်။
ဒီနေ့ လျှောက်ကြည့်ရင်း သတိထားမိသွားတဲ့ Website (interes.tingness.com) တစ်ခုကို သဘောကျတာနဲ့ရှယ်ယာ ပြန်လုပ်လိုက်တာပါ။ Photo Wall... ဒီရက်ပိုင်း Wall ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့အတော် နီးစပ်နေတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ပုံလေးတွေက လှသလား မမေးနဲ့ ။ ကြည့်ရတာ အရမ်း စိတ်ချမ်းသာဖို့ ကောင်းတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 10/10/2008 04:10:00 PM4comments
ကျွန်မကို မေးကြတယ်။ တချို့ ပိုစ့်တွေမှာ Vedio File တွေကို Embedded လုပ်ပြီးတင်တဲ့အခါ Youtube က file တွေကို မတင်ပဲ တခြားနေရာက file တွေကို ဘာလို့ တင်တာလဲတဲ့။ အများစုက Video File တွေ တင်ရင်၊ Share လုပ်ရင် YouTube ကို သုံးလေ့ရှိကြတယ်လေ။ ကျွန်မလည်း YouTube အသုံးများ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခါတလေ YouTube က တချို့ဖိုင်တွေမှာ Embedded လုပ်ဖို့Code တွေကို "Embedding disabled by request" ဆိုပြီး ပေးမထားတတ်ဘူး။ အဲဒီလို အခါတွေမှာဆို တခြားနေရာမှာ တင်ထားတဲ့ Video File တွေကို ရှာပြီး ပြန်မျှလေ့ ရှိတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဒီနိုင်ငံမှာ ညပိုင်း ၈ နာရီကျော်ဆို YouTube ကို သုံးမရတော့ဘူး။ Loading အရမ်းနှေးတယ်။ ကျွန်မ တစ်ယောက်တည်း ကြုံတွေ့ ရတာတော့ ဟုတ်မယ် မထင်ဘူး။ ကျွန်မ နေဖူးသမျှ အိမ်တွေမှာ ဘယ်သူမှ Download တို့Upload တို့ အရမ်းလုပ်လေ့ မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် နှေးတာပဲ။ အင်တာနက်က လူသုံးများတဲ့ အချိန်ဆို သိသိသာသာကြီး နှေးသွာတယ်။ ၃ မိနစ်လောက်ရှိတဲ့ သီချင်း တစ်ပုဒ်လောက် ကြည့်ဖို့ ဆို Loading လုပ်တာ ၁၀-၁၅ မိနစ်၊ တခါတလေ ဒီထက်ကြာကြာ စောင့်ရတယ်။ စိတ်မရှည်ဘူး။ အဲဒီလို နှေးနေတဲ့ အချိန်တွေဆို တစ်ခုခု ကြည့်ချင်တယ်ဆို YouTube မသုံးပဲ တခြားနေရာမှာ တင်ထားတာတွေရှိမလား ဆိုပြီး လိုက်ရှာကြည့်လေ့ ရှိပါတယ်။ တချို့ နေရာတွေမှာ ကြည့်လို့ရတတ်တယ်။ ကျွန်မ ရဲ့ အကျင့်တွေပေါ့။
Video file တွေရှာတဲ့အခါ Google ရဲ့ Vedio search ကိုသာ မက တခြား Video Search Engine တွေကို သုံးပြီး ရှာလေ့ ရှိတယ်။ အဓိက သုံးဖြစ်တာက Blinkx (Video Search Engine) ပါ။ တခြား ( AltaVista, Fooooo ) တွေကိုလည်း တခါတလေ အဆင်ပြေရင်ပြေသလို သုံးပြီးရှာလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန် တော်တော်များများ မှာတော့ Blinkx ကိုပဲ သုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ပါ။ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို စပြီး သုံးဖြစ်သွားလဲ ဆိုတာကို မမှတ်မိတော့ဘူး။ လိုချင်တာတွေ လိုက်ရှာရင် ရှာလို့တွေ့ တာများတာကြောင့် Blinkx ကို အမြဲ သုံးဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ဒီပိုစ့်ရေးမယ် စိတ်ကူးမှ blinkx အကြောင်း နည်းနည်း လိုက်ဖတ်ကြည့် ဖြစ်တယ်။ Blinkx စတင်တာ ၂၀၀၄ ကဆိုတော့ အခုဆို ၄ နှစ်လောက်ပဲ သက်တန်း ရှိသေးတယ်။ ဒီလောက် သက်တန်းလေး အတွင်း Blinkx ကနေ Indexed လုပ်ထားတဲ့ Vedio/Audio က 26 Millions hours ရှိနေပြီး၊ သဘောတူညီမှု့ ရထားတဲ့ ကုမ္ပဏီပေါင်းက ၃၅၀ ကျော်ရှိနေတယ်သိရတယ်။ The largest deep indexed Video Search Engine လို့ ပြောထားတယ်။
Blinkx (Video Search Engine)
Blinkx Search Engine ဟာ Video/Audio files တွေကို ရှာတာအခါမှာ Speech Recognition System ကိုပါ သုံးပြီး ရှာတယ်လို့ သိရတယ်။ ရှာတဲ့သူတွေ ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ စာလုံးတွေကို Video/Audio file မှာပါဝင်တဲ့ အသံတွေနဲ့တိုက်စစ်ပြီး တူတာတွေကို ရှာထုတ်ပေးတာပါ။ ပုံမှန်ဆို Search Engine အများစုက File Upload လုပ်တဲ့သူတွေ ထည့်ထားတဲ့ MetaData တွေ၊ File Name တွေ အပေါ် မူတည်ပြီးပဲ ရှာလေ့ ရှိကြတယ်လေ။ Blinkx ရဲ့ Audio/Video file တွေရှာဖွေတဲ့ နည်းပညာ ကို MSN service နဲ့Live ရဲ့ တချို့ အစိတ်အပိုင်း တွေမှာ 2006 က စပြီးသုံးခဲ့တယ် သိရတယ်။ တခြား Lycos, Infospace, RealPlayer နဲ့AOL မှာလည်း အသုံးပြုကြောင်း ဖတ်ရှု့ သိရှိခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်မ သုံးလေ့ရှိတဲ့ Video Search Engine တစ်ခုကို Share လုပ်လိုက်တဲ့ သဘောပါ။ တခြား ဒီထက်ကောင်းတဲ့ Video Search Engine တွေလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ Vedio Search Engine တွေ အကြောင်း သိချင်တယ်၊ စမ်းကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင် Wiki- Video Search Engine မှာ ကြည့်လို့စမ်းလို့ ရပါတယ်။
နောက်ပြီး Blinkx မှာ Wall it ဆိုတဲ့ Feature ကို သဘောကျမိတယ်။ အောက်ကလို မျိုးလေး။ "Lay Phyu" ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ရှာပြီး Wall စမ်းကြည့်ထားတာပါ။
Posted by Nay Nay Naing at 10/09/2008 04:11:00 PM5comments
Posted by Nay Nay Naing at 10/08/2008 02:34:00 PM4comments